SalesRep.ai: Fampiasana ny faharanitan-tsaina hampandehanana ny fifandraisan'ny Prospect Multi-Channel | Martech Zone
Zoma, Martsa 9, 2018 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Douglas Karr
Toy ity horonantsary avy amin'ny SalesRep seho, ampahany lehibe amin'ny fotoana fivarotana ivelany no lany amin'ny fampifandraisana na amin'ny fandaharam-potoana hifandraisana amin'ny mpanjifa. SalesRep dia mampiasa automatisation antso miaraka amina sehatra mitokana, fizarana fiteny voajanahary mba hialana amin'izany ezaka izany any ambadiky ny ekipan'ny varotrao, ahafahan'izy ireo mifantoka amin'ny varotra fa tsy ny fifandraisana.
Ny sehatra dia mamela ny mpanjifa hanangana ireo fizotrany voarafitra mampiasa fandefasan-kafatra amin'ny mailaka, feo ary SMS.
Ny tsindry bokotra tsotra ao amin'ny CRM anao dia manomboka ny fizotran'ny fanarahana isaky ny fitarihana tokony hifandraisan'ny olona varotrao. SalesRep dia manaraka ny fitarihana amam-bolana nefa tsy reraka. Rehefa tsy vita ny fifanarahana mandritra ny fifandraisana dia ampidiro ny filaharana amin'ny filaharana fanaraha-maso ary hataon'ilay sehatra ny ambiny.
Endri-javatra manan-danja amin'ny SalesRep misy:
Araho ny filaharana - Ny fikorianan'ny antso, ny lahatsoratra ary ny rafitra mailaka dia hanao izay ahatongavana amin'ny fitarihana manokana. SalesRep.ai dia miara-miasa akaiky amin'ny fikambanananao mba hametrahana lamina mifototra amin'ny toerana misy ny tsena fivarotanao. Raha mbola tsy niresaka firaka ianao dia raisina ny dingana manaraka. Raha manara-maso ny antso varotra teo aloha ianao dia manomboka iray hafa. Manampia dingana fanaraha-maso ilaina amin'ny SalesRep.ai.
Antso an-telefaona miaraka amin'i an-toerana anatrehan'ny - SalesRep.ai dia hiantso fitarihana amin'ny anaranao matetika ary araka izay tianao. SalesRep.ai dia hiantso avy amin'ny laharana eo an-toerana ary tsy hanelingelina ny solo-tananao raha tsy mahazo ny lohany eo amin'ny tsipika. Raha vantany vao manao izy ireo - SalesRep.ai dia hilaza amin'izy ireo ny momba ilay antso ary avy eo dia hifandray amin'ny solontenanao na ny sampan-draharahan'ny fandraisana. Raha tsy misy ny firaka, SalesRep.ai dia handao mailaka na hiantona hiantso azy ireo any aoriana any.
Hafatra AI SMS sy mailaka - SMS dia alefa avy amin'ny laharana eo an-toerana ary ny mailaka dia alefa avy amin'ny kaontinao manokana toy ny hoe mandefa azy ireo. Miaraka amin'ny singa AI, rehefa mahazo hafatra avy amin'ny fitarihana i SaleRep.ai dia afaka mahatakatra ny dikany izy ary mihetsika mifanaraka amin'izany. AI dia afaka manakana na manemotra ny filaharana; Fandaharana na famerenana fandaharana antso; ary valio ny fanontaniana tsotra sao mila izany ianao.
Ity misy pikantsary iray momba ny fandrosoana ny maoteran'izy ireo:
Ny rafitra dia feno, miaraka amin'ny fahafaha-misitrika amin'ny mpanjifa rehetra, ny fifanakalozana rehetra ary ny valiny rehetra.
Manome extension Chrome aza izy ireo:
Ny fampidirana dia misy ny Salesforce, Velocify, Microsoft Dynamics, Hubspot, ary Infusionsoft. Amin'ny fampiasana SalesRep.ai, ny orinasa dia afaka misoroka ny fahaverezan'ny mpanjifa, afaka manafaka ny fotoana fivarotana amin'ny fivarotana, ary amin'ny farany hanidy mpanjifa bebe kokoa.
Tags: aitoerana fanendrenacrm intelligencehubspotInfusionsoftMicrosoft Dynamicsfivarotana fanendrena varotravarotra mandeha ho azyantso amin'ny varotrafilaharana varotrasalesforcesalesrepsalesrep.aihafainganam-pandeha